Ampidino Communication Rindrambaiko ho an'ny Windows
Ampidino Communication Rindrambaiko
Trillian, iray aminireo rindrambaiko feno indrindra ahafahanao mitantana serivisy fandefasana hafatra eo noho eo sy ireo mombamomba ny tambajotra sosialy aminny faritra iray, dia safidy tokana izay mifanaraka aminny sehatra Windows, Mac, Web ary Mobile. Ilay programa, izay fantatray hoe Trillian Astra tao aminireo kinova taloha, dia...
Twitch dia azo faritana ho toy ny fampiharana birao Twitch ofisialy izay mikendry ny hampivondrona ireo renirano sy namana ary lalao Twitch tianao indrindra. Ny Twitch Desktop Application, izay rindrambaiko azonao sintonina sy ampiasainao maimaimpoana aminny solo-sainanao, dia fitaovana ilaina raha te hijery Twitch aminny sehatrasa...
TeamSpeak 3 dia programa izay tena malaza indrindra eo aminireo mpilalao ary mamela antsika hanana chat group miaraka aminny feo. Azontsika atao ny mieritreritra ny andiany fahatelo aminilay programa ho programa naverina voasoratra manontolo ao aminny C ++ fa tsy kinova nohatsaraina anny TeamSpeak Classic sy TeamSpeak 2. Ny programa,...
Inona no atao hoe Skype, aloa ve izany? Skype dia iray aminireo fampiharana aminny chat sy fandefasan-kafatra maimaim-poana be mpampiasa eranizao tontolo izao ataonny mpampiasa solosaina sy smartphone. Miaraka aminny rindrambaiko ahafahanao mandefa hafatra, miresaka ary miresaka video maimaim-poana aminny alàlanny Internet, dia manana...
WhatsApp dia fampiharana fandefasan-kafatra maimaimpoana mora apetraka izay azonao ampiasaina aminny finday sy aminny Windows PC - solosaina (toy ny tranokala na tranokala) Azonao atao ny misintona sy mampiasa WhatsApp aminny telefaoninao na mampiasa azy io ho toy ny rindranasa aminny birao Windows PC na solosainao Mac. Ny rindranasa...
Facebook Messenger for Windows, ny programa fandefasan-kafatra nomaninny Facebook, dia natolotra ho anireo mpampiasa Windows 10. Ny interface of the application, izay ahafahana miresaka aminny namanao nefa tsy mankany aminny pejy Facebook, dia mitovy aminireo programa chat efa mahazatra anao. Aminity programa ity dia afaka mandefa...
Yahoo Messenger dia serivisy maimaimpoana ahafahanao mandefa hafatra aminny namanao eo aminny Internet. Ity programa ampiasainao aminny kaonty Yahoo, mailakao sns ity. Mampahafantatra anao koa ny momba ireo fanavaozana aminny serivisy hafa. Ny endri-javatra toy ny tontolonny chat azo antoka miaraka aminny fanohananny firewall, ny...
Yahoo! Mail dia mailaka alefanny Yahoo ho anny mpampiasa solosaina sy takelaka Windows 10. Azontsika atao ny milaza fa ny rindranasanny mailaka, izay mampifangaro ireo fiasa malaza aminny Windows 10, dia miavaka aminny rindrambaiko aminny Internet na aminny lafiny interface na aminny fampiasana. Ny rindranasanny mailaka maoderina tonga...
Ny fampiharana fandefasan-kafatra finday malaza Viber dia azo alaina ao aminny Windows izao. Noho ny rindrambaiko Viber Windows dia afaka mandefa hafatra sy miantso telefaona aminireo mpampiasa Viber ao aminny lisitra maimaimpoana ianao. Ny rindrambaiko Viber Windows dia mametaka ho azy ireo fifandraisana, hafatra ary tantara momba ny...
Noho ny kinova desktop anny LINE, fampiharana fandefasan-kafatra finday, afaka mifandray aminny kaontinao LINE aminny solosainao ianao. LINE, izay ahafahanao mandefa hafatra miaraka aminireo namanao sy mpianakavinao, dia misy sticker afara maherinny 250 ateraky ny tarehy izay azonao ampiasaina mandritra ny hafatra. Ireo mpampiasa anay...
BiP Messenger dia rindrambaiko fandefasan-kafatra maimaimpoana maimaimpoana sy fandefasana horonantsary maimaim-poana ataoni Turkcell izay azo ampiasaina aminny fitaovana finday (Android sy iOS), mpitety tranonkala ary birao (solosaina Windows sy Mac). Tsindrio ny bokotra BiP Desktop Download etsy ambony raha hampiasa BiP Messenger,...
Hangouts Chat no sehatra fandefasan-kafatra anny Google ho anny ekipa. Ny fampiharana izay manintona ny saina miaraka aminny fitoviana aminny Facebook Workplace, Microsoft Teams, ary Slack, dia manamora ny fifandraisanny mpampiasa orinasa. Fampiharana asa mora ampiasaina miaraka aminny bot bota izay azonao zaraina antontan-taratasy,...
Ny programa azo antoka chat ICQ dia miverina aminny fandaharam-potoana miaraka aminny kinova vaovao ICQ 8. Ny programa fandefasan-kafatra, izay nanaporofo ny tenany taminny endriny vaovao sy ny endriny vaovao, dia nitondra ny tenany taminny fanjakana vaovao. Aminity kinova farany ity, izay misy fampiasa vaovao tokoa toy ny fisehoanny...
Cyber ​​Dust dia fampiharana fandefasan-kafatra eo noho eo miaraka aminny rafitra toa ani Snapchat izay afaka mamafa hafatra avy hatrany. Cyber ​​Dust dia manome famafana mandeha ho azy ny hafatrao aorianny fotoana voafaritra rehefa miresaka aminny namana na olona erakizao tontolo izao ianao, ary fampiharana azo ampiasaina aminny finday...